Ny fianakaviana mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Shina ho an'ny Isan-Tanàna - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Ny fianakaviana mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Shina ho an'ny Isan-Tanàna
Fianakaviana lalàna dia ahitana ny vatana ny fitsipiny sy ny raharaha koa averiko aminao izay mifehy ara-dalàna ny andraikitra eo amin'ny olona izay hizara ny fifandraisana ao an-toeranaIreo toe-javatra matetika ny mahakasika ny antoko izay mifandray amin ny ra, na ny fanambadiana, fa ny fianakaviana lalàna mety hisy fiantraikany eo ireo any amin'ny lavitra kokoa na tsotsotra ny fifandraisana ihany koa. Noho ny fihetseham-po tanteraka ny toetry ny ankamaroan'ny fianakaviana lalàna ny toe-javatra, litigants nanoro hevitra mafy mba hitana ara-torohevitra. Yingke dia ny fanompoana manontolo, ny Lalàna iraisam-pirenena Hentitra, miaraka amin'ny foiben-toerany any Beijing. Niorina tamin'ny taona, Yingke Lalàna Mafy efa nametraka ny laza ao anatin'ny teny Sinoa ara-dalàna ny asa-tsena. Maherin'ny ireo mpisolovava, isika ankehitriny, iray amin'ireo lehibe indrindra ny Orinasa Lalàna tao Azia ary. Hafa Birao: ao Guangzhou, Tianjin Lalàna Mafy ny Boase Cohen Collins naorin'ny Melville Boase sy Colin Cohen tamin'ny. Nanomboka tamin'izay, izany no ho mafy orina toy ny mitarika ny tsy miankina ny fanompoana manontolo Lalàna Mafy fitaovana amin'ny Hong Kong ny fahalalana sy ny global tonga. Lalàna Hentitra ny topy maso Yan Mpisolovava dia boutique Lalàna Mafy fanomezana iray-gara miampita sisintany ara-dalàna ny asa fanompoana ao Hong Kong ny lalàna sy ny PRC lalàna. Ny Lalàna Mafy dia roa amin'ny anjara fanompoana iray ao Hong Kong manao Hong Kong lalàna sy ny hafa any Shenzhen, any Shina, ny manao PRC lalàna. Lalàna Hentitra ny topy maso Naorina tamin'ny, Lawman Mpiara-miasa dia professional FDI sy ny varotra Lalàna Mafy monina any Shenzhen, any Shina. Lawman Mpiara-miasa dia be traikefa sy fahalalana ny amin'ny hazo Fijaliana - sisintany Fampiasam-bola, ny Orinasa, ny Varotra Iraisam-pirenena, sy ny Fananana ara-Tsaina. Lalàna Hentitra ny Vilany Deng Lalàna Mafy ao Guangzhou, Shina dia manome ara-dalàna ny asa ny orinasa sy ny faran'ny avo-olona. Manaja ny asany ny fitsipi-pitondran ny fahadiovam-po sy ny fahaiza-miasa mahomby ary maro ny mpisolovava manana traikefa miasa na manao amin'ny sampan-draharaham-panjakana, ny Harena diman-jato orinasa, ary ny sehatra iraisam-pirenena. Lalàna Hentitra ny indray mitopy maso an'i Shina ny Lalàna momba ny Fanompoana (Wuhan) Voafetra dia fanta-daza ny Lalàna Mafy fahazoan-dalana mba hanomezana ara-dalàna sy consulting services ao Shina. Ny ara-dalàna ekipa manana in-lalina ny fahatakaran-javatra sy ny fahalalana ny faritra ara-dalàna ny kolontsaina sy ny tsena fihetsehana. Miaraka mihoatra noho ny roa-polo taona ny fampiharana ny lalàna ao Shina, ny. Lalàna Hentitra ny MC Lalàna Mafy dia mifototra ao Makaô fantatra ihany koa ho toy ny teo aloha Miguel Cravo Lalàna Mafy. Ny mafy orina ao Makaô hatramin'ny taona, ary efa manome ny tena be dia be isan-karazany ny ara-dalàna ny asa eo an-toerana sy ny mpanjifa iraisam-pirenena.
Ny asa handrakotra ny faritra toy ny Banky ny fitantanam-Bola, ara-Barotra.
Lalàna Hentitra ny topy maso Diaz Reus, LLP dia ny Miami-ny foibeny global fomba fanao ara-dalàna mifantoka amin'ny firenena sy ny iraisam-pirenena mitovy fitsarana sy ny varotra ao ny fanao maro ny faritra.
Ny ekipa ara-dalàna dia ahitana ny Fanamarinana ara-panjakana ny mpahay lalàna iraisam-pirenena, heloka bevava, ary ny fifindra-monina ny lalàna. Ny mpanjifa Lalàna Hentitra ny topy maso ireo Lahatsoratra izay Niorina tamin'ny taona, Wiselink Lalàna Mafy dia monina ao Shanghai, Shina.
Manome pitsarana sy ny fanelanelanana ny tolotra, fampiharana faritra ahitana ny varotra iraisam-pirenena, ny distrikan'i admiralty sy ny fari-dranomasina lalàna, ny banky iraisam-pirenena sy ny fampiasam-bola, ny asa, ny orinasa ara-barotra ny lalàna, ny fananana ara-tsaina. Lalàna Hentitra ny Fifampidinihana Paul K.
Ny Lalàna Mafy indrindra ny fomba fanao ny
Chan Mpiara-miasa dia miorina any Hong Kong, Chine ary manome isan-karazany ny ara-dalàna ny asa. Tena faritra ny fomba ahitana asa Fanorenana sy ara-Barotra Fifandirana, Orinasa sy ny Lalàna ara-Barotra, ara-Tsaina ny Fananana, ny Orinasa fitantanam-Bola sy ny Fiarovana, ny fifindra-Monina, ny Toetrany. Lalàna Hentitra ny topy maso Kaye Scholer ny birao dia manolotra feno isan-karazany ny ara-dalàna ny asa ny orinasa teknolojia sy ny tsy miankina ny fampiasam-bola amin'ny orinasa. Avy sarotra ny fananana ara-tsaina ireo olana mahakasika ny patanty, ny zon'ny mpamorona, ny famantarana sy ny varotra zava-miafina momba ny rindrambaiko, fitaovana elektronika, solosaina, fitaovana elektronika, ny fialam-boly. Lalàna Hentitra ny topy maso Grandall Lalàna Mafy dia mitarika ny fanompoana manontolo Shinoa orinasa sy ny ara-barotra ny Lalàna Mafy amin'ny folo birao manerana an'i Shina, stratejika hita eo ny fampiasam-bola lehibe foibe any Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Kunming, Tianjin, Chengdu, Ningbo sy Fuzhou, ary koa ny. Hafa Birao: ao Beijing, Chengdu, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Kunming, Ningbo, Shenzhen, Tianjin Lalàna Mafy ny topy maso Mihaza, mpitarika ny Lalàna Aostraliana Mafy, dia narafitra manodidina ny telo fototra ireo vondrona ara - Barotra, ny Fiantohana sy ny Fananany - manampy antsika ho amin'ny fanompoana isan-karazany ny zavatra ilaina ara-dalàna ny raharaham-barotra, ny governemanta sy ny tsy miankina ny mpanjifa. Isika dia manome ny mpanjifa kokoa ny global tonga amin'ny alalan'ny. Lalàna Hentitra ny topy maso Weil, Gotshal Manges LLP dia premised eo amin ny fanoloran-tena hanafaka ny feo fitsarana ny mpanjifa amin'ny ny sarotra indrindra sy ny zava-dehibe manan-danja. Mpanjifa hiverina any amin'ny izao tontolo izao-pianarana ekipa ny mpisolovava satria isika mihaino tsara ary hanome azy ireo mivantana ny valim - tsy fotsiny. Hafa Birao: ao Hong Kong, Shangai Lalàna Mafy ny Topy maso Foley Lardner LLP dia hajaina fatratra ny androm-pirenena ho Lalàna Mafy manome ny mpanjifa-ny mifantoka, ny orinasa-manokana ny asa izay hiafara amin'ny avo-danja ara-dalàna torohevitra ho an'ny mpanjifa.
Ny fampiharana ny faritra manodidina azy ny tena isan-karazany ny orinasa ara-dalàna ny asa, anisan'izany ny orinasa fahaiza-mitantana sy ny fanarahan-dalàna.
Lalàna Hentitra ny topy maso Amin'ny efa ho telo-polo taona ny traikefa sy ny fahaizana amin'ny roa ao an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena fanao, Lee Ko dia tena hajaina ny mpitarika sy nametraka ny anarany ao Korea amin'ny fanomezana tanteraka isan-karazany ny ara-dalàna sy consulting services ho an'ny eto an-toerana sy iraisam-pirenena ny raharaha. Lalàna Hentitra ny Topimaso ny tanjona dia ny hanome manokana sy feno fanoloran-tena ny asa fanompoana vitsivitsy ny mpanjifa, anisan'izany ny eo an-toerana ny tombontsoa sy ny mpanjifa iraisam-pirenena, toy ny conglomerates vola ao Makaô sy izay mitaky fanampiana ny fitetezana ireo faritra manodidina. Mino isika fa ny fahombiazan'ny mihoatra noho ny hafa rehetra sy ny vahaolana-mirona. Hugill Ip fahazoan-dalana dia tanora tsy miankina Lalàna Mafy, fa ny am-polo taona maro traikefa manome bespoke torohevitra araka ny lalàna sy miavaka mpanjifa ny asa fanompoana amin'ny tsirairay, ny fianakaviana, ny mpandraharaha sy ny raharaham-barotra, ao Hong Kong sy ny sehatra iraisam-pirenena. Qindao dia amin'ny alalan'ny feno isan-karazany ny Lalàna Mafy tao Qingdao, ary ny manontolo Shandong. Izany dia manome ara-dalàna ny asa eo amin'ny lafiny rehetra ny lalàna, ary dia natoky ny ben'ny tanàna sy ny faritany ny fitondram-panjakana, ny orinasam-panjakana, ary koa ny avy any ivelany ny vola sampan'ny orinasa sy ny orinasa maro rantsana. Izany no be dia be Yuan Li Bizlaw Birao fahaizana amin'ny ara-barotra ara-dalàna service, toy ny fifandirana ara-barotra fanapahan-kevitra ara-barotra misahana ny fanelanelanana, ara-barotra trosa famoriam-bola, ny raharaham-barotra fananganana toy ny fametrahana WFOE JV, ny fitantanana orinasa, fifanarahana ara-barotra, ny varotra iraisam-pirenena ny lalàna asa fanompoana. D'Andrea Mpiara-miasa ankapobeny dia nisarika ny saina ho italiana izy, ary ny orinasa vahiny, izay manana faniriana mba mampivondrona ny tenany ao amin'ny eran-tany ny toe-karena amin'ny kilonga mifantoka any Azia, ary Eoropa, ary koa i Rosia sy i India. Mandeha eran-ary ny lasa iraisam-pirenena lehibe ny fahafahana feno. JC ara-Dalàna dia mavitrika Lalàna Mafy ao Hong Kong tamin'ny mpisolovava ny mpivavaka ao Hong Kong, ny Shinoa avy ao amin'ny tanibe, Malezia, ary Royaume-uni. Isika misahana ny isan-karazany ny orinasa sy miampita sisintany manan-danja ao anatin'izany ny ara-barotra sy ny an-trano-pitsarana, fifandirana fanapahan-kevitra, ny fifanakalozana ara-barotra, fanarahana. JAC Mpisolovava Lalàna Mafy ahitana ny ekipa za-draharaha mpahay lalàna ao amin'ny isan-karazany ny ara-dalàna-tsaha mafy mifantoka amin'ny orinasa, ny fitantanam-bola, ara-barotra iraisam-pirenena toetrany ny fandaminana, pitaterana, ny fianakaviana ny lalàna sy ny ankapobeny-pitsarana. Efa nanoro hevitra ho an'ny mpanjifa ao IPO sy ny M Ny tetikasa ihany koa. Mitjans Mpiaro, ny Lalàna Mafy ny foibeny ao Barcelone sy ny ahitana manam-pahaizana avy any amin'ny Barcelona Fisotroana Fikambanana (ICAB) raharaham-barotra manam-pahaizana manokana sy ny panjakana. Ho an'ny mihoatra ny ampahefatry ny taonjato efa nandamina ny raharaha nampiandraiketina antsika amin'ny teny espaniola sy ny vahiny ny olona sy ny orinasa ao koa. Niorina tamin'ny taona, ONC Mpisolovava nitombo mba ho lasa iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-toerana Lalàna Orinasa mihoatra ny ny mpikambana ara-dalàna-mahay sy ny fanohanana ny mpiasa. Efa voatondro amin'ny Azia lalàna ny Mombamomba azy toy ny"tena soso-kevitra"ny Lalàna Hentitra, ary ny laharana amin'ny efi-trano sy ny mpiara-Miombon'antoka toy ny mitarika mafy ao.
Nahoana ary Rehefa Manakarama ny Fianakaviana Fifandirana Mpisolovava ao Delhi